Chandelier mgbanaka na Led Bulbs - (UL) - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ Chandeliers Ncha chandelier na ikanam bulbs & # 8211 ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Mgbanaka chandelier na Led ìhè bulbs - (UL)
Chandelier Chandelier na Led Bulbs - (UL) Nnukwu
okporoko: 806881881628 Category: Chandeliers Product ID: 19974
Okpokoro chandelier dị ka mgbanaka - Ntanaka ọkụ gụnyere - Ọnụ ọgụgụ nke ọkụ 1 - Ntọala ihu - Nchebe, dị oke mkpa: emere mgbe a gbanwere ngwaọrụ ahụ. All arụmọrụ ga-rụrụ site na a pụrụ iche na ẹkesikpede - Mgbanwe ma ọ bụ tampering nwere ike ime ka ngwaọrụ ize ndụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-ebelata ọrụ niile maka mmebi nke ngwaahịa ya na arụnyere na ụzọ nke na-emeghị ntụziaka. (UL)
Enweghi ule ugbua.
Buru nke mbu iji nyochaa "Ncha chandelier na Led bulbs - (UL)" Kwụsị azaghachi
Adreesị email gị agaghị ebipụta. A na-akara akara ubi *
Nyocha gị Rate ... zuru okè mma ezuru Ọ bụghị ihe ọjọọ ogbenye
Nyocha gị *
Chandelier mma na epupụta - cm. 80L x 100h - (DFL)
Onyinye chal na-acha ọcha na ọkụ 3 - Kwekọrọ na klas klas; A, A +, A ++ - (UL)
Okpokoro ihe mkpuchi ụlọ na kristal mmiri ozuzo 3 ọkụ - (UL)
Okpokoro ebe nchekwa / ọkụ ọkụ 5 ọkụ - Kwadoro na klas bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
Ulo elu ulo a na-acha uhie uhie - Akụkụ: cm. 110 x 20 x 40h - (DFL)
chandelier na kristal nke nwere oriọna LED - cm. 40 x 40 x 80h - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
6 LED 36W ụlọ na-acha ọkụ, ọcha dị ọcha - dakọtara na bọl klas: A, A +, A ++
Chandelier na kristal na lampshades - cm. 80 x 80 x 105h - (DFL)
Ulo chandelier na akwa lampshades - (UL)
502€ Aggiungi al carrello
Chandelier na nwa lampshade ntụpọ na ajari - cm. 36 x 36 x 110h - (UL)
Okpokoro chacha chacha na ọkụ 8 mere ka ekwuru - (UL)